Xaaladihii ugu dambeeyay Xaafada Islii Nairobi iyo shaqaaqadihii Magaalada Gaarisa – SBC
Xaaladihii ugu dambeeyay Xaafada Islii Nairobi iyo shaqaaqadihii Magaalada Gaarisa
Posted by Webmaster on Noofember 20, 2012 Comments
Xaalada Xaafada Islii ee ay Soomaalidu degto ayaa maanta degenaansho aan caga buuran ku taagneen laga dareemayay ka dib markii ay ka dhaceen maalmihii la soo dhaafay shaqaaqado ay sameynayeen kooxo u dhashay wadankaasi.
Sida wararka ay maanta nagu soogaarayaan ciidamada Kenya ayaa ku sugan xaafadaasi iyadoo aysan jirin dhaq dhaqaaqyadii xaafadaasi noocyadooda kala duwan iyadoo Soomaalida halkaasi ku dhaqana ay ku jiraan guryahooda.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada dad ay u qabteen qarax halkaasi ka dhacay maalin ka hor qaarkood lagu waayay dambi ayna siidaayeen, waxaase jira dad iyagu loogaga shaki qabo oo weli ku sugan saldhiyada ciidamada Police-ka.
Dadweyne Farabadan oo Kenyan ah ayaa isku dayaya in ay gudaha ugalaan xaafada ay soomaalida ku badantahay ee Islii iyagoo damacsan in ay geystaan falal ka dhan ah bin aadan nimada waxana ay ku hubeysan yihiin budad iyo Seefaf inkastoo Soomaalida halkaas Degena ay difaac kala hortagaan mararka ay dhacaan Falalka weerar ee Isku dhaca ah.
Dhinaca kale waxaa iyana xaalad hakad ah ku jira isku socodkii magaalada Gaarisa ee dalkaasi iyadoo ciidan Police ah oo tiro badan maalin nimadii shalay lagu daadiyay magaaladaas.
Waxaa Dhacay Shaqaaqado ciidanka iyo dadka deegaanka dhexmaray iyadoo la sheegay in ciidamada Police-ku geysteen Falal ka baxsan bin aadan nimada iyagoo dad badan ooo rayid ah u geystay Jirdil
Waxaa sidoo kale Gubasho soo gaartay suuqa ugu weyn magaalada iyadoo xalay dhan uu heystay dab aad u balaaran waxaana uu dhamaan dhulka dhigay dhamaan hantidii taalay suuqaasi.
Xaawo Jaamac C/raxmaan (Tufaax)